शशांकको टिप्पणी : रामचन्द्र लडिसक्नुभो, प्रकाशमानलाई काठमाडौंबाहिर चिन्दैनन् - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
प्रकाशित मिति : २०७८ मंसिर १, बुधबार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मंसिर २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूह एकढिक्का हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्न बाँकी सबै उम्मेदवार एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले संस्थापनइतर समूहबाट एक जना मात्रै उम्मेदवार बनाउन पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । ‘सिटौलाजीलाई पनि हामीले तान्नुपर्छ । उहाँसँग पनि धेरै मान्छेको आकर्षण छ,’ सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘एउटै मात्र उम्मेदवार बनायौं भने शेरबहादुर देउवा हार्नुहुन्छ ।’
महामन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकाले दोहोर्‍याउन नहुने आशय व्यक्त गरेका छन् । पौडेल आफ्नो समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेदवार बन्ने कसरतमा छन् ।
उनले सभापतिका अर्का आकांक्षी प्रकाशमान सिंह काठमाडौंमै केन्द्रित भएको आरोप लगाए । पार्टीको महामन्त्री भइसके पनि उनलाई देशभरका धेरै कार्यकर्ताले नचिन्ने पनि महामन्त्री कोइरालाको दावी छ ।
‘प्रकाशमानजीलाई सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ, तर सत्य के हो भने उहाँ काठमाडौंमै घेरिएर बस्नुभएको छ । काठमाडौं बाहिर निस्केपछि उहाँलाई मान्छेले चिन्दैनन् । उहाँ महामन्त्री हुनुभयो, तर कार्यकर्ताबीच उहाँमा आत्मीयता देखिँदैन’ उनले भने ।
त्यस्तै सभापति पदका अर्का आकांक्षी डा. शेखर कोइरालाको तयारीप्रति महामन्त्री कोइराला सकारात्मक देखिएका छन् । उनले सभापतिको उम्मेदवार बन्न शेखरले सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘शेखर दाइ पनि लागिराख्नुभएको छ । उहाँको सक्रियता देखिरहेको छु । उहाँको मिलेर जानुपर्छ भन्ने उहाँको भावनालाई कदर गर्छु,’ उनले भने, ‘उहाँसँग भेट भएको छैन । म भेट्छु । मलाई त उहाँले कन्भिन्स गर्न सकिहाल्नुहुन्छ । अरुलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो ।’
महामन्त्री कोइराला पनि सभापतिको दौडमा छन् । तर उनी सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको पौडेल समूहको बैठकमा पनि कोइरालाले सर्वसम्मत उम्मेदवार दिन नसके पार्टी देउवालाई बुझाइदिए हुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर २४–२६ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।